Avy dia nanitsy nandrava ny arofanin’ny tetezana eo Tanjombato izy, ka nitsoraka tao an-dreniranon’i Ikopa. Tetezana manana haavo mitovy amin’ny rihana telo no nianjerany. Ny rano dia lalina hatrany amin’ny dimy na enina metatra.
"Maty tao anatiny ny mpamily fa nifatotra fehikibo sy nihidy ny fitaratra", hoy ireo nahita maso ny fitrangan’ny loza. Ny olona iray niaraka taminy kosa mba avotra ny ainy fa tafavoaka. Mpampianatra izy roa lahy ary vao avy nisongona fiarakodia hafa talohan’io loza io.
Nilentika tany anaty rano tanteraka ilay fiara. Tonga teny an-toerana ny mpamonjy voina, nitady izay hevitra hamonjena ilay mpamily fa tsy nisy fanafany. Vatana mangatsiaka sisa nalaina tao anatin’ilay fiara. "Mety ilay fidonan’ny fiara tamin’ny arofanina no nikapoka ny lohany, satria nandona izany ny ilany havia misy azy eo aloha. Izay dona hafa mety nahazo azy tamin’ny fiara nilentika tao anaty rano io heverina fa nahafaty azy io", hoy ny mamonjy voina iray. Voalaza fa efa nisy nahita nirimorimo be teny Tsaralalàna, saika nandona môtô ity fiara ity talohan’izao loza izao.
"Mety hafoy io fiara io fa be loatra ny simba tamin’ny fianjerany tao anaty rano tao. Tsy azo raisina intsony ny maotera mafana, tratran’ny rano mangatsiaka", hoy ny mpanamboatra fiara iray, tonga nizaha ity loza tsy fahita firy teny amin’ny tetezan’i Tanjombato ity.